မေမေတို့ရဲ့ ကလေး ကော်ဖီသောက်တတ်နေပြီလား ဒါကိုဖတ်ကြည့်ပေးနော်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင်းမှာ ရှားစောင်းလတ်ပတ်ကို ဘယ်နေရာမှာ သုံးမလဲ
ဘယ်လိုအခြေအနေပဲရောက်နေပါစေ ကလေးပညာရေး မပြတ်သွားစေဖို့
ကလေး ပိုက်ဆံစုတတ်ဖို့ ဘယ်ကနေစသင်ပေးမလဲ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ကြုံရနိုင်တဲ့ အပူလွန်ကဲခြင်းပြဿနာ(Overheating)
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင်း ထောပတ်သီးစားရင် ဘာတွေကောင်းလာမှာလဲ အစရှိတဲ့ မေးခွန်းများ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ခန္ဓာကိုယ်အနံ့ ပြောင်းလား
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ အသားအရည်ခြောက်တာ ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ
အသက်(၁)နှစ်နဲ့ (၁၁)လမှာ ကလေး ဘယ်လောက်ထိ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနေလဲ
ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး ကလေးငယ်ဖျားမှာ စိုးရိမ်တတ်တဲ့ မိဘတွေအတွက်
Do you have any question? Askaquestion
Naw Po Po Aung
Daw Naw Moe
မျိုးဥ ကြေွချိန် ဘယ်လို မှတ်ရမလည်းရှင့်
ဆရာရှင့် 5လပိုင်းနဲ့6လပိုင်းကြားမှာ(37) 6လပိုင်းနဲ့7လပ�...
Cho Zin Thein Lwin
ဒေါက်တာရေ ညီမအမျိုးသားက ကျားငါးကောင်နဲ့အရက်ကို သောက်ပါတယ် မိန်းခလေရော သွေးသားကောင်းအောင်သောက်လို့ရတယ်ဆိုလို့ ကိုယ်ဝန်ရှ်တာကိုမသိပဲ ညီမလည်း ရယသီသွေားနောက်ကျလို့နှစ်ကြိမ်သောက်မိပါတယ် အခုကိုယ်ဝန်က သုံးလပါ မူမမှန်တာဘယတစ်ခုမှမဖြစ်ပေမဲ့ ကလေးကို ထိခိုက်နိုင်လားသိချင်လို့ပါ
ဒေါက်တာရေ ညီမအမျိုးသားက ကျားငါးကောင်နဲ့အရက်ကို သောက်ပါတယ် မိန်းခလေရော သွေးသားကောင်းအောင်သောက်လို့ရတယ်ဆိုလို့ ကိုယ်ဝန်ရှ်တာကိုမသိပဲ ညီမလည်း...
6 comments 106
မာက်ဴရီ ဓာတ္ပါတဲ့ ပင္လယ္စာေတြေျပာျပေပးပါရွင့္
Pwint Phyu Thinn
ကိုယ္ဝန္ ၁၆ ပတ္ရွိပါပီ။ ဘယ္ႏွပတ္ေလာက္ဆို မိန္းကေလး ေယာက်ာ္းေလးသိရဖို႔ ultrasound ႐ိုက္လို႔ရမလဲရွင့္
Hnin Yee Oo
မင်္ဂလာပါရှင် ညီက 20.9.20က​နေ 22.9.20 မှာ menstration ပြီးပါတယ် ။ ုံမှန်ဆို ၅ရက်​လောက်ဆင်းသူပါ။ irregular သမားပါရှင်။ 9...
Chit Thiri Aung
တူမ လေးက ၈ လ ပြည့်မှ ဝါစိမ်းနီ စကျွေး မှာမို့ စကျွေးကျွေး ခြင်း ပါဝင်ရမဲ့ အသီးနှံ ရယ် ! တနေ့ ဘယ် နှကြိမ် ကျွေးလို့ ရမလည်း သိချင်လို့ ပါရှင့်...
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအတြင္း Ultrasound ကို ဘယ္ႏွႀကိမ္အမ်ားဆံုး႐ိုက္ႏိုင္ပါသလဲ။
ဆရာရှင့် သမီးလေးက ၉ လထဲမှာပါ သမီးလေးက Aircon ခန်းထဲမှာတောင်...
ဆရာရှင့် သားကခုနိုဝင်ဘာ၈ရက်ဆိုနှစ်နှစ်ပါ စကားမပြောလို့ပါဆရာ ဒိုင်း မြောင် တာ့တာ ဟယ်လိုဆိုတဲ့စကားကို ဟို လို့ပြောတာကလွဲပြီးဘာကိုမှမပြောပါဘူး...
4 comments 9,899
အသက္ ၃၄ ပါ ခုလထဲမာပဲေမြးခါနီးကိုယ္ဝန္ေဆာင္မွေသြးလဲတိုးခဲ့ပါတယ္ေရမႊာနည္းသြားလို႔ ခြဲေမြးလိုက္ရပါတယ္ကလးအဖတ္မတင္ခဲ့ပါ ဆရာ ေနာက္ကေလး ယူ ဖို႔ကို...